Ihe oriri na-atọ ụtọ nke Guiana gastronomy | Akụkọ Njem
Mkpụrụ osisi Tropical, ihe oriri nke Guiana gastronomy
Mgbe ha mụtara ntakịrị ihe banyere Guiana gastronomy, karịsịa akwukwo nri, anụ, azụ. Ugbu a, na dịka o kwesiri ime na nri ọ bụla ma ọ bụ nri abalị ọ bụla bara uru nnu ya, anyị ga-amata ihe ụfọdụ desser dị mkpa nke ebe a.
Catalinas bu ato uto ndi Guyana, ha bu ihe eji ato uto, nke a makwa dika kukumba. A naghị ere ha naanị n’obodo a mana a nabatara ya na mba ndị dị ya nso.
Akwadebe ha na oyibo, ntụ ọka wit na mgbakwasa na-atọ ụtọ. Na Katalinas enwere ike ịtọ ha ụtọ dị ka eji megharịa ọnụ n'ụlọ nri ma ọ bụ n'ọtụtụ ụlọ nri n'okporo ámá anyị nwere ike ịchọta ebe ọ bụla. Na mgbakwunye na eji megharịa ọnụ a ị nwekwara ike ịchọta ọtụtụ ndị ọzọ iji mechaa nri dị ka banana fritters, donuts ma ọ bụ nsị nsị akpọnwụ n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ,
N'ebe dị ka nke a, na latitude ebe Guyana dị, mkpụrụ osisi nke ebe okpomọkụ bụ otu n'ime ụzọ ndị kachasị mma iji rie maka ihe eji megharịa ọnụ, dịkwa mma maka ịkwadebe ihe ọ deliciousụ na-atọ ụtọ ma na-enye ume ọhụrụ mgbe okpomọkụ dị ọkụ.
N'etiti mkpụrụ osisi na anyị nwere ike ịchọta na Guyana bụ aki oyibo, guava, painiapulu, mango, pọọpọ, unere ma ọ bụ elderberries, nke na-eme salad na mkpụrụ osisi na-edozi ahụ, aki oyibo nougat, smoothies, sorbets aki oyibo na otu eriri niile dị ụtọ na nke okike.
N'isiokwu na-esonụ, anyị ga-amata ụfọdụ mmanya ndị anyị nwere ike ịnụ ụtọ na ebe a ma anyị ga-aga n'akụkụ nke abụọ nke usoro isiokwu a raara nye gastronomy nke mba a, ebe m ga-ewetara gị ụfọdụ ntụziaka. na ị nwere ike iweta ekpomeekpo nke Guyana na tebụl gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gastronomy » Ihe oriri na-atọ ụtọ nke Guiana gastronomy
Tourlọ ọkụ Tourlitis dị na Andros
Valle de Bohí, efakutom emi ẹwakde ndikụt ke Lleida